Home News Xildhibaan geeryooday oo kursigiisa Maanta loo tartamaayo!!
Xildhibaan geeryooday oo kursigiisa Maanta loo tartamaayo!!
Magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG ee Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa lagu wadaa maanta inay ka qabsoonto doorashada Kursi ka mid ah Golaha Shacabka Soomaaliya.
Xildhibaanka Kursigaan ka geeriyooday, ayaa lagu magacaabi jiray Xildhibaan Khaliif Sheekh C/laahi Dheere .
Xildhibaanka ayaa ku geeriyooday 28/April/ sanadkii 2018 Magaalada Muqdisho.
Musharaxiinta Kursigaan u taagan waxaa ka mid ah:
Isaaq Khaliif Sheekh
C/qadir Shekh Maxamed Nuur
Xasan Macallim Ibraahim
C/laahi Shekh Maxamed